Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Thailand » Rosiana Sputnik vaksinina tombony ho an'ny fizahan-tany Phuket
Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fahasalamana • Hospitality Industry • Vaovao • Vaovao Mafana Rosia • Safety • Vaovao Mafana Thailand • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Vaovao isan-karazany
Vaksinin'ny rosiana Sputnik
Phuket dia nandritra ny taona maro no toerana nalaza be tamin'ireo mpandeha Rosiana, nahatratra tampoka tamin'ny 2019 niaraka tamin'ny fahatongavana 700,000 tao anatin'ny 5 volana fohy tamin'ny 2019, izay tonga tamin'ny sidina mivantana avy amin'ny Federasiona Rosiana. Rosiana 1.4 tapitrisa no nitsidika an'i Phuket tamin'ny taona 2019.
Nankatoavin'ny Ivontoerana Thailandey an'ny COVID-19 Situation Administration (CCSA) ny vaksinin'ny Rosiana Sputnik.
Ny tsena rosiana mivoaka no lehibe indrindra eran'izao tontolo izao any Shina.
Rehefa miomana sahy ny Rosiana amin'ny vanim-potoana fararano sy ririnina, ny fankatoavana ny vaksinin'ny Sputnik dia fotoana mety indrindra amin'ny vanim-potoana avo manomboka amin'ny Novambra amin'ity taona ity.
Ny vanim-potoana snowbird nentim-paharazana hatramin'ny Novambra ka hatramin'ny Martsa dia rehefa midina mafy ny mari-pana any Rosia ary koa amin'ny faritra maro any avaratr'i Eropa, izay manondro ny mpandeha hiondrana an-tsehatra tropikaly sy lanitra madio any Phuket.
Androany, ireo mpandray anjara amin'ny fizahantany ao Phuket, Thailand, dia manambara ny fankatoavana mariky ny vaksinin'ny Sputnik avy amin'ny Center Thailand for COVID-19 Situation Administration (CCSA) izay kasaina hamoaka ny tsena rosiana ao amin'ny nosy atsimon'i Thailand.
“Vaovao tsara ho an'i Phuket io. Fotoana tokony hihoarana ny Sandbox ary hananganana fototra ho an'ny fandraisana andraikitra lehibe kokoa momba ny fizahantany, ”hoy ny filohan'ny Fikambanan'ny mpizahatany Phuket, Bhummikitti Ruktaengam. “Afaka miverina amin'ny fotony ankehitriny ny indostria ary mifantoka amin'ny vanin-taona ririnina avaratra. Fotoana mety lehibe ho an'i Phuket io. Ireo no tsenan'ny lova eto amintsika. ”
Laguna Phuket, toerana iray tafiditra ao amin'ny faritry Bangtao Beach malaza, ahitana hotely 7; ivom-panadinana PCR miasa ao amin'ny Hopitaly Bangkok; ary velaran-tany malalaka, zaridaina sy farihy, efa nahazo tombony ny Phuket Sandbox nomena ny lazany azo antoka, nefa ity dia dingana lehibe iray raha ny filazan'ny Tale mpitantana azy, Ravi Chandran.
"The fanekena ny vaksinin'ny Sputnik dia mpanakalo lalao ho an'i Phuket, "hoy izy. “Ny tsena rosiana mivoaka no lehibe indrindra eran'izao tontolo izao any Shina ary tonga lafatra ny fotoana amin'ny vanim-potoana avo manomboka amin'ny Novambra amin'ity taona ity. Phuket Sandbox dia voaporofo fa fahombiazana ary izao dia hitondra ireo zava-bita ireo ho amin'ny avo kokoa mbola ho an'ny hotely rehetra, mpandray anjara amin'ny fizahantany, ary ny vondrom-piarahamonina eo an-toerana. "
Hatramin'ny 1 Jolay dia efitrano fandraisam-bahiny maherin'ny 300,000 no voavidy hatramin'ny faran'ny volana aogositra nataon'ny mpitsidika iraisam-pirenena tonga tamin'ny alàlan'ny hetsika Phuket Sandbox, isa marobe izay antenaina hiakatra haingana rehefa manakaiky ny vanim-potoana lehibe. Ireo mpitatitra rosiana voalahatra sy voatondro dia tokony ho tonga ao Phuket manomboka amin'ny oktobra 2021.
Raha niresaka momba ny mety ho tsena "vonona" ny C9 Hotelworks Managing Director, Bill Barnett, dia nilaza fa "Tonga any amin'ny tany ririnina 2021 sy manova tsena, ny Rosiana, izay matetika manana halavan'ny 11-12 alina eo ho eo, dia lafatra mety amin'ny boaty Sandbox. ”